[Ukara] Wondershare LiveBoot 2012? Computer Bootup Software
- Rịọ Krishna
All I Kwesịrị Iji-abịa azụ mkpọka
N'agbanyeghị kọmputa gị / ike mbanye na-crashed, adịghị buut na niile, ma ọ bụ ghara inwe ike n'ime Windows n'ihi ihe ọ bụla, Wondershare LiveBoot CD nwere ike na-ha nile. Tụnyere na ọhụrụ Microsoft WinPE 3.0 technology, a bootable CD / USB mbanye-enye gị ohere buut elu ọ bụla na kọmputa, nakwa dị ka fix kọmputa booting nsogbu, naghachi Windows, nnapụta data, nkebi ma ọ bụ mmepụta oyiri disk, hichaa data na ndị ọzọ, ihe karịrị 40+ ịba uru na ọrụ na ngụkọta. Onye ọrụ-enyi na enyi interface simplifies mgbagwoju anya idozi usoro n'ime nanị ole na ole clicks maka ma savvy ọrụ na newbie. Ka gị jiri PC mfe buut si CD / USB now! (Cheta: The ugbu a version bụghị Ofụri Esịt dakọtara na windows 8. Ọ naanị ike buut elu kọmputa gị, mmepụta oyiri ike mbanye, ndabere & Weghachi File na System, nkebi, Format Draịvụ na bootable mode.)
Cheta na: Ọ bụ ezigbo mfe ime a CD ma ọ bụ a bootable USB mbanye na LiveBoot na gị onwe gị, n'ihi ya, Wondershare adịghị enye a CD diski ugbu a. Ị pụrụ ime ka ọ na a ide CD ma ọ bụ USB mbanye ke otu click n'okpuru enyemaka nke LiveBoot software.
Main ọrụ nke buut CD / USB maka Windows
Windows Iweghachite - Nke a buut diski enye a ngwọta zuru ezu setịpụụrụ niile Windows okuku na booting nsogbu gụnyere booting ọdịda, virus ọrịa,-acha anụnụ anụnụ / nwa ihuenyo, na ndị ọzọ.
Paswọọdụ & Key Finder - Nke a buut CD / USB maka Windows nwere ike inyere iji tọgharịa Windows paswọọdụ mgbe ị na-echefu nbanye paswọọdụ na chọta Windows ma ọ bụ Office ngwaahịa isi mgbe ị chọrọ reinstall ha.
Data Iweghachite - Nke a bootable disk ike napụta ọ bụla data si gị esịtidem / mpụga diski ike ma ọ bụ partitions n'agbanyeghị ehichapụ, formatted, ma ọ bụ dum disk emerụ, gụnyere akwụkwọ, Archives, ozi ịntanetị, photos, vidio, na audio faịlụ.
Disk Management - Nke a DOS buut disk awade zuru ezu disk management ngwọta gụnyere nkebi management, na disk / nkebi cloning, disk / nkebi hichapụ, na ndị ọzọ.
N'ike n'ike Ịnapụta a jiri Computer
Buut elu kọmputa ma ọ bụrụ na ọ na-oria virus.
Naghachi ngwa ngwa si mkpọka dị ka-acha anụnụ anụnụ na ihuenyo na nwa ihuenyo.
Idozi booting nsogbu, random mkpọka na-efu faịlụ mkpọka dị ka 'ntldr na-efu', 'bootmgr na-efu', wdg
Idozi nkebi table, rụrụ arụ ndekọ, virus ndị nje na-ndekọ isi uru, na jiri MBR ọbụna na ọ na-oria virus.
Naghachi usoro faịlụ na 1 Pịa.
Nnapụta Windows 98 / ME / 2K / Home / 2003 / XP / NT / Vista na Windows 7.
Buut elu ọ bụla na kọmputa
Buut elu ọ bụla desktọọpụ ma ọ bụ na laptọọpụ mgbe ị pụghị ịbanye Windows, gị na kọmputa mkpọka, ma ọ bụ na ị chọrọ na-arụ ọrụ n'okpuru buut gburugburu ebe obibi.
Buut elu kọmputa site inserting buut CD gị CD mbanye ma ọ bụ ịkwụnye bootable USB, na ibidogharịa kọmputa gị.
Jiri ọhụrụ WinPE 3.0 technology - 100% ngwaike ndakọrịta.
Gbapụta okwuntughe na-eme
Tọgharịa Windows paswọọdụ mgbe ị chefuru nbanye paswọọdụ.
Chọta Windows isi mgbe ị chọrọ reinstall ha na-enweghị ọtụtụ narị dollar na-eri.
Chọta Microsoft Office ngwaahịa isi maka reinstall zere a abụọ zụọ.
Nnapụta data si jiri kọmputa ma ọ bụ ike mbanye
Nyefee faịlụ (foto, music, akwụkwọ, wdg) mpụga nchekwa ngwaọrụ bụrụ na kọmputa gị ma ọ bụ ike mbanye na-merụsịrị mebiri emebi ma ọ bụ nwere ike ghara weghachiri eweghachi.
Nnapụta faịlụ site na formatted ma ọ bụ jiri ike mbanye.
Nnapụta faịlụ site jiri Windows.
Mmepụta oyiri dum ike mbanye na nkebi
Mmepụta oyiri dum ike mbanye ma ọ bụ partitions na esịtidem ma ọ bụ mpụga disk.
The cloned ike mbanye ga-bootable.
Nkwado niile Windows version, ide, SATA, SCSI, USB, FireWire, na ndị ọzọ.
Hichapụ dum ike mbanye ma ọ bụ nkebi
Miri ehichapụkwa dum ike mbanye ma ọ bụ nkebi na 1 Pịa. Ọ nwere ike na-eji maka n'okpuru nzube.
Enye gị a ọhụrụ mmalite mgbe ị chọrọ reinstall Windows.
Igbu virus mgbe gị na kọmputa na-ebute buut oru virus.
Adị n'elu ike mbanye mgbe ị chọrọ ọcha agadi ike mbanye.
Gbochie gị data na faịlụ site na-agbake site data mgbake software mgbe ị chọrọ inye gị na kọmputa.
Nkebi, usoro na ọcha gị disk
Nye zuru okè nkebi management - eke, ihichapụ, resizing, formatting, Iṅomi, na-ezo, wdg
Mgbanwe ezuru gị mmepụta oyiri a nkebi ma ọ bụ dum ike mbanye na esịtidem ma ọ bụ mpụga disk dị ka amasị gị.
Naghachi MBR (Master buut Record), wughachi furu efu nkebi table, na n'elu Doppler ka ego maka ọjọọ ndi.
Ndabere na weghachite faịlụ, nchekwa, partitions ma ọ bụ dum diski.
DOS Wụk Environment
Nke a DOS buut disk enye MS-DOS iwu gburugburu ebe obibi na niile isi DOS iwu dị ka chkdsk, debug, fdisk, DiskCopy, Scandisk, wdg
Naghachi gị Windows CD isi
Weghachite Windows ngwaahịa isi na 1-pịa si jiri ma ọ bụ ezi kọmputa.
Buut Up jiri Computer na Windows 7 buut Disk